जोडी सुहाओस् भन्नको लागि साढे ४ सय किलोका पहलमान १ सय किलोकी श्रीमतीको खोजीमा, यस्तो छ श’र्त ! - Alert Khabar
Homeमनोरञ्जनजोडी सुहाओस् भन्नको लागि साढे ४ सय किलोका पहलमान १ सय किलोकी श्रीमतीको खोजीमा, यस्तो छ श’र्त !
पाकिस्तानी हल्कको नामले परिचित २७ वर्षका अरबाब खिजर हयात पेशाले भारत्तोलक पनि हुन् । उनलाई खान बाबाको नामले पनि चिनिन्छ । उनको वजन ४ सय ४४ किलोग्राम रहेको छ । तर यो भिमकाय वजन अब उनकै लागि स’मस्याको कारक बनेको छ ।
किनकी उनले अहिलेसम्म आफ्नो साइजको जिवनसाथी फेला पार्न सकेका छैनन् । साढे ४ सय किलो वजनका हल्कलाई कम्तीमा १ सय किलो वजनकी पत्नी चाहिएको छ । ताकि उनको जोडी सुहाओस् । खैबर पख्तुनख्वा जिल्लाको मरदानमा बस्दछन् अरबाब ।
अरबाबको परिवारले उनको हुनेवाला बेहुलीको उचाई ६ फिट चार इन्च हुनुपर्ने श’र्त राखेको छ । अरबाबको उचाई ६ फिट ६ इन्च रहेको छ । साथै हुनेवाला बेहुलीसँग राम्रो खाना बनाउने सिप हुनु पनि आवश्यक छ । स्मरण रहोस् कि अरबाबलाई दैनिक १० हजार क्यालोरी डाइट चाहिन्छ । उनले हरेक बिहान ब्रेकफास्टमा मात्रै ३६ वटा अण्डा खाने गर्दछन् । त्यसका साथै उनले एक दिनमा चारवटा कुखुराको मा’सु र पाँच लिटर दुध समेत खान्छन् ।
एक ट्रयाक्टरलाई रसीले बाँधेर तानेको भिडियो भा’इरल बनेसँगै अरबाब पहिलोपटक चर्चामा आएका थिए । सन् २०१२ मा जापानमा आफुले ५ हजार किलो वजन उठाएको दा’बी उनको छ । साथै, आफुलाई डब्लुडब्लुइ बाट पदक प्राप्त भएको र आफ्नो नाम गिनिज बुकमा समेत लेखिएको जिकिर उनको छ । यद्यपि यथार्थमा चाहीँ उनको नाम गिनिज बुकमा हालसम्म दर्ज भएको देखिँदैन । एजेन्सी